Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 21)
Poco F1 waa kan, sumadda cusub ee dhammaadka sare ee 'Xiaomi' oo qiime aad u jaban leh
Poco F1 waa mobiil lagu garto inuu yahay 5,99 "shaashadda AMOLED, Snapdragon 845, 6 / 8GB oo RAM ah iyo 4.000 mAh baytari.
Shaandheeyay sawirka ugu horreeya ee Nokia X7
Sawirkii ugu horreeyay ee Nokia X7 ayaa la shaaciyay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi shirkadda sawirkeedii ugu horreeyay mar hore la helay.
OnePlus 5 iyo OnePlus 5T waxay horeyba u haysteen taageero Treble
OnePlus 5 iyo OnePlus 5T waxay la jaan qaadayaan Mashruuca 'Treble'. Raadi wax ku saabsan cusbooneysiintan u oggolaaneysa taageeradan.
Samsung waxay ku shaqeysaa shan taleefan oo cusub oo Yurub ah
Samsung ayaa shan telefoon u soo saareysa Yurub. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan shirkaduhu markay bilaabanayaan Yurub.
EMUI 9.0 oo ku saleysan Android Pie ayaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2018. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow nooca cusub ee lakabka Customization-ka Huawei.
Meizu 16X wuxuu maraa AnTuTu wuxuuna muujiyaa astaamahiisa muhiimka ah
Meizu 16X wuxuu marayaa AnTuTu wuxuuna muujinayaa tayadiisa muhiimka ah. Soo hel waxa shirkaddu noo hayso.
Nokia 6.1 Plus iyo Nokia 5.1 Plus: Nooca cusub ee bartamaha u dhexeeya
Nokia 6.1 Plus iyo 5.1 Plus: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabista. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan labada taleefannada dhexdhexaadka ah ka raadi Nokia.
Shirkadda Isbaanishka, BQ, ayaa hadda ka dhigtay rasmiga shirkadda Aquaris C. Wax ka baro dhammaan astaamaha farsamo ee taleefankan cusub ee heerka hoose ah.
Inta badan isticmaaleyaasha keydiyay xusuusta 9 waxay doorteen nooca 512 GB
Bishii Agoosto 9, shirkadda Kuuriya waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy Note 9, oo ah terminaal na siiya kala duwanaansho xiiso leh haddii aan isbarbar dhigno. Sida laga soo xigtay tirooyinka ka imanaya Kuuriyada Koonfureed, qaabka 512 GB ayaa ah kan ugu dhow, oo aad uga badan kaydinta 128GB tusaale
Nokia 7 Plus wuxuu heli doonaa Android Pie bisha Sebtember
Shalay waxaan ku dhawaaqnay warka naga soo gaadhay Koonfur Afrika, halkaas oo afhayeen shirkadeed uu sheegay in Huawei P20, dhammaan noocyadeeda kala duwan, Nokia 7 Plus, oo heli doona cusbooneysiinta Android Pie inta lagu jiro bisha Sebtember, Waxay noqon doontaa casriga ugu horeeya ee leh Snapdragon 660 si loo helo.
Caviar Samsung Galaxy Note 9 waxay la timid 1 kg oo dahab ah waxayna ku kacaysaa qiyaastii 50.000 oo euro
Shirkadda Caviar ayaa diyaarsatay Samsung Galaxy Note 9 oo dhabarkiisa ku jira kiilo garaam oo dahab ah qiimo dhan 50.000 kun oo Euro. Soo ogow!
Galaxy Note 9 wuxuu marayaa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Galaxy Note 9 wuxuu dhaafayaa imtixaanka adkeysiga JerryRigEverything. Raadi wax badan oo ku saabsan tijaabada ah in dhamaadka sare ee Samsung ay ku xiran tahay.
The OUKITEL K8 horeyba ugu jiray iibin hor leh oo leh faa'iidooyin waaweyn
Horeba waa loo sii iibiyay illaa Ogosto 27, OUKITEL K8 oo leh qiimo dhimis 20%, shaashadda 6, 4 GB oo RAM ah, 64 ROM, iyo laba kamaradood oo leh qiimo aad u sarreeya
Huawei Mate 20 wuxuu lahaan doonaa kamarad gadaal saddex-laab ah
Huawei Mate 20 wuxuu yeelan doonaa kamarad gadaal saddex-laab ah. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ee timaadda deyrta.
Shaandheeyay sawirro cusub oo Vivo X23 ah
Shaaciyey naqshaddii ugu dambaysay ee Vivo X23 oo leh shaashad iyo laba kamarad. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee dhowaan soo socota.
Xiaomi Pocophone F1 wuxuu marayaa Geekbench markale, markan 8GB oo RAM ah
Xiaomi Pocophone F1 wuxuu marayaa Geekbench oo leh 8GB RAM. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan muuqaalkan cusub ee tilmaamaya!
Booqashada Galaxy Note 9 waxay dhaaftay Galaxy S9
Bishii Agoosto 9keedii, Kuuriyaan ka socda Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigay Galaxy Note 9 cusub, oo ah terminaal u yimaada suuqa si uu isugu dayo inuu horumariyo Sida laga soo xigtay dhowr warbaahin Kuuriya ah, keydka Galaxy Note 9 ayaa ka badan kuwii ay heleen Galaxy S9 markii ay ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay.
ZTE ayaa hada daaha ka qaaday boodhadh ku dhawaaqaya bilaabida Axon 9, oo ah dhaxalka Axon 7. Soo ogow waxa shirkadu noo hayso!
Huawei P20 waxaa loo cusbooneysiin doonaa Android Pie bisha Sebtembar oo dhan
Markasta oo soo saaruhu uu furo terminal cusub, waxay kuxirantahay waqtiga sanadka uu sidaas sameeyo, qaar badan ayaa ah kuwa isticmaala ee tixgeliya xawaaraha Sida uu ku dhawaaqay afhayeenka Huawei ee Koonfur Afrika, Huawei P20 wuxuu heli doonaa Android P inta lagu jiro bisha Sebtember
La daabacay sawirradii ugu horreeyay ee lala qaado Nokia 9
Sawirradii ugu horreeyay ee kamaradda Nokia 9 ayaa halkan jooga.Faahfaahin dheeraad ah ka hel sawirradan lagu qaaday kaamirada sare.
Shaandheyn cusub oo lagu soo rogay Xiaomi Mi MIX 3
Shaandheeyeyaal cusub oo la sifeeyey oo ku saabsan Xiaomi Mi MIX 3. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee imaan doonta dhowr bilood.
Huawei Nova 3 iyo 3i waxaa lagu iibin doonaa Iris Purple color in India laga bilaabo usbuuca soo socda
Huawei Nova 3 iyo Nova 3i waxaa lagu heli doonaa midab casaan ah laga bilaabo Isbuuca soo socda Hindiya. Soo ogow!
Huawei P20 Pro wuxuu ku dari doonaa laba midab oo cusub xadka kala duwan ee IFA 2018. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow nooca cusub ee dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha
Huawei Mate 20 Lite wuxuu u adeegsan doonaa Kirin 710 processor ahaan
Huawei Mate 20 Lite wuxuu xambaari doonaa processor Kirin 710. Faahfaahin intaas ka badan oo taleefanka cusub ah ka hel shirkadda soo saaraha Shiinaha, oo faahfaahinteeda ay noo soo socoto
ZTE waxay ku soo bandhigeysaa Acon 9 si rasmi ah IFA 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee shirkaddu soo bandhigeyso.
OnePlus 6T waxaa la bilaabi lahaa Oktoobar iyada oo sicir kordhin lagu daray. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha.
Sony waxay soo bandhigeysaa taariikhaha taleefannadooda ay helayaan Android 9.0 Pie
Sony waxay soo bandhigeysaa liiska iyo taariikha taleefannada heli doona Android 9.0 Pie. Baro qalabka ku raaxeysan doona OS-kan cusub!
Sony Xperia XA3 Plus ayaa hadda ku dillaacay Geekbench Benchmark. Ku ogow waxa ay Sony keyd noogu hayso taleefankan soo socda!
Sida laga soo xigtay DisplayMate, shaashadda Galaxy Note 9 ayaa ah tan ugu fiican adduunka taleefanka
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida soosaarayaasha waaweyn aysan ula socon karin hal-abuurnimada sanadlaha ah ayna doorbidayaan inay sharad ku muujiyaan muuqaalka Samsung Galaxy Note 9 ayaa mar kale xaqiijiyay, in Samsung uu yahay soo saaraha ugu fiican adduunka.
Huawei's Kirin 980 ma lahaan doono Cortex-A77 diirkja, laakiin kiliyaha 'Corm-Cortex-A76'
Shirkadda processor ee soo socota ee Huawei, HiSilicon Kirin 980, laguma qalabeyn doono afar xabbadood oo Cortex-A77 ah, laakiin waxaa leh afar Cortex-A76. Soo ogow!
Huawei Nova 3 ayaa iibiyey laba milyan oo unug bil gudaheed
Huawei Nova 3 wuxuu gaarayaa laba milyan oo unug oo la iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha moodooyinka cusub ee sumadda Shiinaha.
Nokia waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub bisha Ogosto 21
Taleefoonka cusub ee Nokia ayaa daaha laga qaadi doonaa 21-ka Ogosto. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ee cusub, oo laga yaabo inuu yahay Nokia 9.
Nokia 7 Plus ayaa ku guuleysatay abaalmarinta EISA ee qeybta ugu wanaagsan ee telefoonka macaamiisha
Nokia 7 Plus ayaa heshay abaalmarinta EISA ee mobilada loogu tallo galay suuqa. Raadi wax badan oo ku saabsan abaalmarintan muhiimka ah!
Google wuxuu ku shaqeyn lahaa kaaliye jir ahaaneed
Tababaraha Google: Kaaliyaha jimicsiga Google. Raadi wax badan oo ku saabsan kaaliyaha ay shirkaddu bilaabayso mustaqbalka dhow.
Vivo X23 muraayadaha u gaarka ah xaday: 3D aqoonsiga wajiga iyo in ka badan
Astaamaha muhiimka ah ee Vivo X23 waa la sifeeyaa ka hor inta aan la soo bandhigin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa moobilkani noo keenayo!
Sharaf 8X: Taleefanka Cusub ee Shaashadda Weyn ayaa xaday
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Maamuuska 8X. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan soo saaraha Shiinaha ee u muuqda shaashadiisa weyn.
Huawei Mate 20 wuxuu imaan doonaa Oktoobar
Huawei Mate 20 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar. Ka raadi wax badan oo ku saabsan noocyada cusub ee taleefannada shirkadda Shiinaha ee imaan doonta deyrta.
Samsung, shirkadda Kuuriyada Koonfureed, waxay hadda sameysay Exynos 5100 rasmi ah, modemkii ugu horreeyay adduunka ee 5G. Waxaan kuu fidineynaa warka!
The Xiaomi Mi A2 wuxuu helaa cusbooneysiinta u dhiganta bishan, wax badan ka ogow wararka ku saabsan balastarkaani noo keenayo!
Xiaomi Pocophone F1 wuxuu baabi'inayaa tartankiisa Geekbench
Tijaabadii ugu horreysay ee waxqabadka ee Xiaomi Pocophone F1 ayaa ka muuqatay Geekbench, natiijooyinka ayaa kaa yaabi doona
Blackberry KEY2 LE ayaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2018
Blackberry KEY2 LE ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa IFA 2018. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka shirkadda cusub.
LG wuxuu ku shaqeeyaa taleefanka 5G sanadka soo socda
LG waxay soo saari doontaa taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G nuska hore ee sannadka 2019. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda Kuuriya moodelkan.
OPPO F9 Pro caddaymaha xaday
La shaandheeyey qeexitaanka cusub ee OPPO F9 Pro. Faahfaahin dheeraad ah ka hel taleefanka cusub ee nooca Shiinaha ee lagu soo bandhigo toddobaad gudihiis
Xiaomi Mi Pad 4 Plus waa rasmi: shaashadda 10.1 ″, batari 8.260mAh iyo in ka badan
Xiaomi ayaa hadda samaysay kaniini cusub oo rasmi ah: Mi Pad 4 Plus. Midkani wuxuu ku yimaadaa shaashad 10.1-inji ah iyo batari weyn oo gaaraya 8.260mAh.
Dhamaan tilmaamaha farsamo ee Huawei Kirin 980 waa la sifeeyaa
Faahfaahinta farsamo ee processor-ka xiga ee Huawei, HiSilicon Kirin 980, ayaa hadda la helay. Wax badan ka baro SoC!
Telefoonnadii ugu horreeyay ee Nokia ee cusbooneysiiya Android 9.0 Pie ayaa shaaca ka qaaday
Kuwani waxay noqonayaan telefoonnadii ugu horreeyay ee Nokia ah ee yeelanaya Android 9.0 Pie. Soo ogow noocyada noqon doona kuwa ugu horreeya ee kor loo qaadayo.
Telefoonka Samsung ee isku laaban ayaa imanaya si ka dhakhso badan sidii la filayay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka xanta ah ee ku saabsan imaatinka taleefankan.
Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga labada taleefan ee hoose.
Xiaomi ayaa ka sarreysa Samsung oo ah iibiyaha ugu fiican Hindiya. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka shirkadda Kuuriya ee Hindiya, suuq sii kordheysa oo muhiim ah.
Alcatel 7 hadda waa rasmi: Ogow qeexitaankiisa
Alcatel 7: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub soo saaraha maanta la soo bandhigay.
Oppo R17 waa rasmi: 6.4 ″ AMOLED oo leh darajo, SD670 iyo in ka badan. Baro taas!
Oppo R17 ayaa hadda lagu shaaciyay shirkadda boggeeda Shiinaha. Soo hel dhammaan tilmaamaha farsamo ee mobilka cusub!
Soo dejiso sawirrada Samsung Galaxy Note 9
Markasta oo terminal cusub uu kudhaco suuqa, qaar badan ayaa ah kuwa ugu isticmaalka badan Android ee fiiriya darbiyada lagu daro hadaad jeceshahay waraaqaha cusub ee aan aragnay intii lagu guda jiray soo bandhigida Galaxy Note 9, markaa adiga waxaan ku tusineynaa xiriiriyeyaasha si aad u soo dejiso iyaga.
OUKITEL WP2: Taleefanka ugu fiican ee diida biyaha
OUKITEL WP2: Taleefanka ugu badan ee biyuhu galaan. Ka raadi wax badan oo ku saabsan moodelkan cusub nooca Shiinaha ee imaan doona Sebtember.
POCOPHONE F1 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Ogosto 22 gudaha Hindiya
POCOPHONE F1 waxaa lagu soo bandhigi doonaa gudaha Hindiya Ogosto 22. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha.
Qaar ka mid ah Pixel XL waxay leeyihiin dhibaatooyin xagga lacag bixinta degdegga ah
Isticmaalayaasha Pixel XL waxay leeyihiin dhibaatooyin xagga lacag bixinta degdegga ah. Ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatada ka dib markaad cusbooneysiiso Android 9.0 Pie.
Batariga Galaxy Note 9 waa mid aad amaan u ah, sida ay sheegtay Samsung
Batariga Samsung Galaxy Note 9 ayaa ka amaan badan sidii hore. Raadi talaabooyinka ay shirkadu qaaday si ay u ilaaliso batteriga.
Sawirada ugu horreeya ee Huawei Mate 20 Lite waxay muujinayaan qormooyinkeeda
Shaandheeyey qeexitaannada iyo sawirrada Huawei Mate 20 Lite. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan heerka dhexe ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha.
Qeexitaannada Blackberry KEY2 LE, ee shirkadda soo socota ee shirkadda, ayaa la sifeeyey
Tilmaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Blackberry KEY2 LE, oo ah nooca yar ee KEY2, ayaa hada la soo daadiyey. Waan ku ogeysiineynaa!
ZTE waxay durbaba tijaabineysaa 5G
ZTE waxay tijaabooyinka ugu horreeya ku qaadataa 5G gudaha Shiinaha. Raadi wax badan oo ku saabsan horumarka tikniyoolajiyaddan oo la soo saari doono sannadka 2019.
Barnaamijka 'OPPO Find X Super Flash' wuxuu bilaaban doonaa Ogosto 17
Barnaamijka 'OPPO Find X Super Flash' wuxuu ka bilaabmi doonaa Shiinaha 17ka Ogosto. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sii deynta nooca taleefanka.
HTC waxay soo bandhigaysaa taleefannada ugu horreeya ee lagu soo bandhigo Android 9.0 Pie
HTC waxay ku dhawaaqeysaa taleefannada ay cusbooneysiin doonaan Android 9.0 Pie. Soo ogow liiska taleefannada ugu horreeya ee sumadda ee cusbooneysiin doona marka hore.
Kuwani waa qeexitaannada la sheegayo ee Sony Xperia XZ3 sida ku cad daadad cusub
Xanta cusub ee Sony Xperia XZ3 waxay nooga imaaneysaa bogga rasmiga ah ee shirkadda, kuwani waxay noqon karaan qeexitaanada qalabkan.
Barnaamijka OPPO Find X Lamborghini ayaa lagu iibiyaa afar ilbidhiqsi
Barnaamijka 'OPPO Find X Lamborghini' ayaa lagu iibiyaa Shiinaha muddo afar ilbiriqsi ah uun. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan guusha qalabkan noocan ah.
Sony wuxuu soo bandhigayaa taleefannada ugu horreeya ee cusbooneysiinaya Android 9.0 Pie
Telefoonada Sony ee heli doona Android 9.0 Pie ayaa dhawaan shaaca ka qaaday. Soo ogow noocyada noqon doona kuwa ugu horreeya ee hela cusbooneysiinta.
Samsung waxay mar kale ku dhaleeceyneysaa Apple xayeysiisyadeeda cusub
Samsung ayaa mar kale ku eedeysay Apple xayeysiisyadeeda. Ka ogow wax badan oo ku saabsan dhaleeceynta shirkadda Kuuriya ee ogeysiisyadan Galaxy Note 9.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan bisha julaay 2018, sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan bisha July ee sannadkan, kaasoo ay ku jiraan Xiaomi Black Shark iyo kuwa kale.
Xiaomi Mi A2 iyo Mi A2 Lite oo horeyba looga heli jiray Spain
Xiaomi Mi A2 iyo Mi A2 Lite ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. Waxbadan ka ogow imaanshaha labada taleefan ee Spain.
YAR: Nooca cusub ee xayeysiinta ee mobilada ee Xiaomi
YAR: Nooca cusub ee taleefanka sare ee Xiaomi. Ka ogow wax badan oo ku saabsan sumaddan cusub ee shirkadda Shiinaha ay soo bandhigtay maanta.
Netflix loogu talagalay Android ee HD / HDR taleefannada cusub
Netflix waxay cusbooneysiisaa liiska taleefannada HD / HDR. Soo ogow taleefoonnada cusub ee Android ka hela shahaado.
Palm wuxuu kula laaban doonaa Android taleefan yar oo cabirkiisu yar yahay
Palm waxay soo saari doontaa taleefan yar oo Android ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee suuqa ku soo laaban doona.
Bixby 2.0: Kaaliyaha Samsung waa la cusbooneysiiyay
Bixby 2.0: Kaaliyaha Samsung wuu fiicnaaday waana la cusbooneysiiyay. Ogow wax badan oo ku saabsan isbeddelada lagu sameynayo Saxeexa Kuuriya Kuuriya.
Samsung Galaxy Watch: Cusboonaysiinta saacadaha Samsung
Samsung Galaxy Watch: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan saacadda cusub ka raadi sumadda Kuuriya ee maanta la soo bandhigay.
Samsung Galaxy Note 9 hadda waxaa laga heli karaa Orange
Samsung Galaxy Note 9 ayaa horeyba loogu heli karaa iyada oo horay loo sii dalbaday Orange of Spain labadeeda nooc ee RAM iyo ROM.
Samsung waxay soo bandhigeysaa af-hayeenkeedii ugu horreeyay ee caqli-gal ah Bixby, oo ah kaaliyaha shirkad ee shirkadda
Samsung waxay hadda soo bandhigtay af-hayeenkeedii ugu horreeyay ee caqli badan, waxaana loogu magac daray Galaxy Home. Waxay la timid Bixby, kaaliyaha dalwaddii astaanta u gaarka ah astaanta u gaarka ah.
Bilooyin badan oo xan ah kadib, Agoosto 9 ayaa ugu dambayntii timid, taariikhda ay dhamaan dadka jecel qoraalada kaladuwan ay sugayeen inay arkaan in shirkada Kuuriyada Samsung ay hada si rasmi ah usoo bandhigtay Samsung Galaxy Note 9 cusub, calankii ugu dambeeyay ee sanadkaan lasoo bandhigi doono. .
Huawei Mate 20 wuxuu yeelan doonaa batari 4.200 mAh ah. Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha ee imaan doonta deyrtan.
Huawei wuxuu ku tijaabiyaa Android 9.0 Pie afar ka mid ah taleefannadeeda
Huawei wuxuu horeyba uga shaqeynayaa Android 9.0 Pie afar taleefan. Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ay sumadda Shiinaha diyaarinayso.
Daadinta cusub ayaa muujin karta in Xiaomi Mi 8X uu yeelan doono laba nooc, waxay noqon kartaa Mi 8 iyo Mi 8 SE
BQ waxay cusbooneysiin doontaa 10 taleefan oo loogu talagalay Android 9.0 Pie. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada awood u yeelan doona inaad cusboonaysiiso nooca cusub ee nidaamka hawlgalka.
Asus Zenfone Max Pro wuxuu imaan doonaa Spain bisha Sebtember
Asus Zenfone Max Pro wuxuu imaan doonaa Spain waqti yar kadib. Telefoonka cusub ee ASUS ee u adeegsada Pure Android nidaamkiisa hawlgalka.
Oukitel WP2 Tilmaamaha iyo Tilmaamaha
Markii aad iibsaneysid taleefan casri ah, isticmaaleyaal badan ayaa tixgeliya arrimo kala duwan, gaar ahaan haddii isticmaalka ay qorsheynayaan inay siiyaan, shirkadda Aasiya ee Oukitel, waxay qarka u saaran tahay inay suuq cusub ka hirgasho Terminal cusub oo 10.000 mAh ah.
Meizu 16 iyo 16 Plus: astaamaha iyo qiimaha calaamadaha calanka cusub
Meizu ayaa hadda soo saartay Meizu 16 iyo 16 Plus. Soo hel dhammaan astaamaha farsamo ee taleefannada cusub ee shirkadda!
HTC waxay diiwaan galisaa biilkeedii ugu xumaa muddo 15 sano ah
Wareejinta HTC ayaa hoos u dhacday 77% bishii Luulyo. Ogow wax badan oo ku saabsan hoos u dhaca wareegga shirkadda Taiwanese.
Fosil wuxuu ku soo bandhigi doonaa smartwatches-keeda cusub IFA 2018
Fosil waxay soo bandhigi doontaa jiilkeedii afraad ee smartwatch ee IFA 2018. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan saacadaha cusub ee soo saaraha ee soo socda dhawaan.
Qualcomm si ay u soo bandhigto processor-keeda cusub ee smartwatch bisha Sebtember
Shirkadda Qualcomm ayaa soo bandhigi doonta processor-keeda cusub ee smartwatch bisha Sebtember 10. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooca cusub ee 'Snapdragon'.
Qaar ka mid ah taleefannada Samsung waa inay sugaan illaa 2019 si ay u helaan Android Oreo
Samsung ayaa cusbooneysiin doonta qaar ka mid ah taleefannada Android Oreo sanadka 2019. Ka ogow wax badan oo ku saabsan jadwalka cusbooneysiinta astaanta.
Sawirro cusub iyo xog ku saabsan PocoPhone F1
Faahfaahin cusub iyo sawirro xaday oo ku saabsan PocoPhone F1. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka nooca cusub ee Xiaomi.
Sanduuqa Smartisan Nut Pro 2S wuxuu muujinayaa astaamahiisa muhiimka ah
Astaamaha ugu muhiimsan ee Smartisan Nut Pro 2S ayaa un soo ifbaxay iyadoo lagu mahadinayo sharaxaadda sanduuqa. Baro iyaga!
Meizu 16s waxay gaareen hal milyan oo boos celin China ah. Raadi wax badan oo ku saabsan guusha moodooyinkan kahor soo bandhigiddooda.
Leagoo ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefankiisa soo socda, Leagoo S10. Waxay ku imaan doontaa shaashad AMOLED iyo kamarad gadaal laba-laab leh. Soo ogow!
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee Xiaomi Mi 8X
Xiaomi Mi 8X: Bedelka cusub ee Mi Note kala duwan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefankan sawirradiisa mar hore la baahiyay.
Telefoonno badan oo Android ah ayaa dhibaatooyin ka haysta amarka "OK, Google"
Telefoonno badan oo Android ah ma isticmaali karaan amarka "Ok Google". Raadi wax badan oo ku saabsan cayayaankaan saameynaya isticmaaleyaal badan.
Telefoonka Aasaasiga ah ayaa horeyba u cusbooneysiinaya Android 9.0 Pie. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka kaas oo ah kan ugu horreeya ee hela cusbooneysiinta.
LG Q8 (2018): Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida heerka dhexe. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bartamaha dhexe ee noocyada Kuuriya.
Razer Phone 2 ayaa la bilaabi karaa dhammaadka 2018
Telefoonka cusub ee Razer ayaa bilaaban doona sanadkaan gudihiisa. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soosaarka nooc cusub ee sumadda dhammaadka sanadka.
Google ayaa shaaca ka qaadi lahayd taariikhda soo bandhigida Pixel 3
Google Pixel 3 waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 4. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee taleefannada Google.
OnePlus 6 wuxuu hagaajin doonaa dhibaatooyinkaaga shaashadda cusbooneysiinta soo socota
Cusbooneysiin ayaa la soo saari doonaa si loo hagaajiyo dhalaalka shaashadda ee OnePlus 6. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta ay soo saaraha Shiinaha soo saari doonaan.
Qin AI, Xiaomi cusub oo leh Android qiyaastii 25 euro
Xiaomi ayaa hadda billowday Qin AI, oo ah aaladda cusub ee aaladda Android oo qiimaheeda lagu qiyaaso 25 euro in wax laga beddelo. Baro taas!
Asus Zenfone 5Z wuxuu helaa horumarin kala duwan iyo astaamaha kamaradaha cusbooneysiinta cusub
Asus Zenfone 5Z oo lagu soo bandhigay dhamaadkii bishii febraayo xarunta MWC ee magaalada Barcelona ayaa hada heshay casriyeyn cusub oo lagu hagaajinayo qeybta sawirada.
Huawei Mate 10 ayaa iibiyey in ka badan 10 milyan oo unug
In ka badan 10 milyan oo unug oo ka mid ah Huawei Mate 10 ayaa la iibiyey.
Nokia 5.1 Plus ayaa dhawaan laga bilaabi doonaa dalal dhowr ah
Nokia 5.1 Plus ayaa laga heli doonaa meel ka baxsan Shiinaha goor dhow. Qalabka ayaa hadda helay shahaadada Bluetooth. Waan kuu balaarinay!
Samsung waxay joogi doontaa IFA 2018 oo leh alaabooyin cusub
Samsung waxay ku soo bandhigi doontaa alaabooyin cusub IFA 2018. Ka ogow wax badan oo ku saabsan sheekooyinka cusub ee shirkaddu ku soo bandhigi doonto dhacdada ka dhacday Berlin.
Bixinta HTC U12 Life, astaanta bartamaha soo socota, ayaa la sifeeyey
Meel ka mid ah HTC U12 Life, oo ah soosaaraha Taiwanese soo-saaraha casriga ah ee soo socda, ayaa hadda la soo daayay. Baro taas!
Xiaomi Mi MIX 2S wuxuu si toos ah ugu cusbooneysiin doonaa Android P
Xiaomi Mi MIX 2S wuxuu si toos ah u heli doonaa Android P. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta ku imaan doonta taleefanka wax yar.
Samsung waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta bisha Ogosto ee Galaxy S8, S9 iyo Note 8
Balastarka amniga ee u dhigma bishaan Ogosto ayaa hadda loo sii daayay Samsung Galaxy S8, S9 iyo Note 8.
Samsung Galaxy Note 9 oo buuxa ayaa sifeeyey kahor inta aan lasoo bandhigin
Liiska buuxa ee qeexitaanka farsamo ee Samsung ee Galaxy Note 9, taleefanka weyn ee la soo bandhigi doono 9-ka soo socda ayaa soo ifbaxaya Faahfaahinta farsamo ee Samsung ee Galaxy Note 9 ayaa hadda la faafiyey dhawr maalmood ka hor soo bandhigideeda rasmiga ah.
Oppo waxay noqoneysaa shirkadii ugu horeysay ee mobiil noo keenta Corning Gorilla Glass 6
Oppo waxay noo keeni doontaa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa oo ay la socoto Corning Gorilla Glass 6, sida dhowaan lagu dhawaaqay.
Google Pixel 3 XL Leaks on GeekBench: Android P ayaa shaaca laga qaaday
Google Pixel 3 XL waxaa kaliya lagu sii daayay Geekbench. Qalabkani wuxuu ku faanaa Android P, 4GB RAM iyo processor sideed-core Qualcomm ah.
Sidii la filayey, qaasatan haddii aan ka hadalno Samsung, marka ay maalmo kooban naga xigaan ...
Oppo waxay hadda ku dhawaaqday nooc cusub oo ah 'Oppo A3s' oo leh RAM sare iyo awoodda keydinta gudaha.
Baro naqshadda Huawei's Mate 20 Lite ka dib markaad dhex marto TENAA
Huawei Mate 20 Lite wuxuu soo maray TENAA wuxuuna helay shahaadada. Thanks to this, waxaan horey u ogaanay naqshada rasmiga ah ee ay leedahay. Waan ku tusaynaa!
Dib u eeg GPS Qiimo jaban Smartwatch Leo Sport Sp958. Hada mahadsanid qiimo dhimista kuuboon. € 56.75 !!
Xiaomi Mi 8 wuxuu imaan doonaa Spain 8da Ogosto
Xiaomi Mi 8 waxaa laga bilaabi doonaa Spain 8da Ogosto. Waxbadan ka ogow taariikhda bilaabida dhamaadka-sare ee wadankeena.
Noocyada Samsung Galaxy Tab A 10.5, cusub oo ka yimid Koonfurta Kuuriya
Dhowr saacadood ka hor, Samsung waxay soo bandhigtay Galaxy Tab S4, oo ah kiniinkii ugu fiicnaa ee shirkadda ilaa maanta ee qalabeeya processor Snapdragon 835. Tanina ma imaanin Samsung waxay noo keenaysaa kiniin cusub. Kani waa Galaxy Tab A 10.5, aalad ay ku shaqeyso sideed-core Snapdragon 450 oo ka socda Qualcomm.
New Samsung Galaxy Tab S4: astaamaha iyo qiimaha Baro taas!
Shirkadda soo saarta taleefannada casriga ah ee ugu guulaha badan adduunka ayaa noo keeneysa kiniin cusub. Waxaan ka hadleynaa Samsung Galaxy Tab S4, dhaxal sugaha Galaxy Tab S3 La kulan kiniinka cusub ee Samsung: Galaxy Tab S4. Midkani wuxuu la yimaadaa Snapdragon 835 SoC, shaashad weyn oo 10.5-inji SuperAMOLED ah, iyo inbadan.
Samsung waxay horey u ogolaatay Galaxy Note 9 in la keydiyo in kasta oo aan si rasmi ah loo soo bandhigin
Ogosto 9, shirkadda Aasiyaanka Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Galaxy Note 9, in kasta oo qeexitaannada badankood horey u jireen In kasta oo xaqiiqda ah in weli aan la iibin, haddana Samsung Galaxy Note 9 horey ayaa loogu sii haysan karaa Mareykanka.
Galaxy Note 9 ayaa ka muuqda fiidiyow ay sifeysay MobileFun
In kasta oo ay weli u hadhsan tahay toddobaad iyo in yar oo ka hadhay bandhigga rasmiga ah ee Galaxy Note 9, haddana sawirrada iyo fiidiyowyadu wali way muuqdaan halka aad rabto Haddii aad rabto inaad aragto sida ay u egtahay Galaxy Note 9, ragga jooga MobileFun waxay fursad u heleen fiidiyoow oo ka mid ah jiilka cusub ee kala duwan ee Xusuusin ah.
Naqshadda dambe ee Oppo F9 waxay xaqiijineysaa kamarad labajibbaaran oo ay weheliso akhristaha sawirka faraha
Oppo F9 waa aaladaha xiga ee laga soo saaro shirkadda Shiinaha. Kuwani waxay horey u muujiyeen heer aad u yar oo cajiib ah munaasabadda Oppo F9 ayaa shaaca ka qaaday naqshadeynta dambe iyada oo ay ugu mahadcelineyso laba boor oo rasmi ah. Midkani wuxuu ku imaan doonaa laba nooc oo midabbo leh: buluug iyo casaan.
Xiaomi waxay ahayd shirkadda leh kobaca ugu sarreeya rubucii labaad ee sanadkan
Maanta, mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna miisaanka culus suuqa waa Xiaomi. Tani kaliya kuma guuleysan inay kasbato ixtiraamka iyo doorbidida Xiaomi, waa shirkadda Shiinaha ee leh kobaca ugu sarreeya ee la helay intii u dhexeysay bishii Abriil iyo Juun ee sannadkan. Waxaan si faahfaahsan u bixinnaa warka!
Waqtiga sii qabsiga ee Oukitel K8 ayaa hadda furan
Shirkadda Aasiyaanka ah ee Oukitel waxaa lagu gartaa sannadihii la soo dhaafay iyadoo soo saareysa telefoonno leh astaamo aad u xiiso badan oo leh qiimo ka badan xilligii boos celinta ee Oukitel K8 ay hadda furan tahay, terminal leh aalad sawir leh oo ay soo saareen Sony iyo 5.000 mAh batari.
Sony waxay iibisay kaliya 2 milyan oo telefoon rubucii labaad ee sanadkan
Muddo bil ah ayaa laga joogaa markii rubacii labaad ee sanadka la sagootiyay, iyadoo laga faa’iideystay qaar ka mid ah soo saarayaasha taleefannada casriga ah halka kuwa kale ay kaliya ka hartay shirkadda Sony, iyadoo la diiwaan geliyay kaliya laba milyan oo unug oo la iibiyay rubucii labaad ee sanadka. Tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac halis ah. Soo ogow!
Huawei ayaa ku jirta kaalinta labaad ee adduunka ugu iibka badan
Huawei wuxuu ka sarreeyaa Apple iibka rubuca labaad. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka soo-saaraha Shiinaha ee rubuckan labaad adduunka oo dhan.
Mobaylka 5G ee Huawei wuxuu isticmaali doonaa nidaam qaboojiye oo horumarsan
Waxaan kaliya dhowr bilood ka fogaaneynaa inaan goobjoog uga noqono teknoolojiyadda 5G mobilada kala duwan. Soosaarayaasha sida Huawei horeyba u shaaciyeen iyagoo ku saleynaya bilaabida Huawei waxay isticmaali doonaan nidaamka qaboojinta ee ku saleysan saxanka naxaasta ah si ay u baabi'iyaan kuleylka sababtoo ah isticmaalka shabakada 5G.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ayaa loo maleynayaa inuu marayo TENAA oo leh hoos u dhac yar
Mid ka mid ah aaladaha soo jiitay dareenka ugu badan illaa iyo sanadkaan, oo aan aad ugu badnayn tayadiisa ama faa'iidooyinkeeda, laakiin nashqaddeeda xigta ee Xiaomi waxay ka diiwaangelisay qalab TENAA. Marka loo eego xogta la bixiyay, waxay noqon kartaa nooc ka mid ah Mi 8 Explorer Edition.
Dhowr qeexitaan farsamo ee Huawei Mate 20 ayaa lagu sifeeyay mahadsanidiisa qalabka
Maalmo ka dib, faahfaahino gaar ah ayaa laga sii daayaa calanka soo socda ee shirkadda Shiinaha ee Huawei, qaar waxay kuxirantahay qalabka Huawei Mate 20 ayaa la daadiyay dhowr saacadood ka hor. Ogow dhammaan tilmaamaha farsamo ee la muujiyay!
Lenovo wuxuu bilaabi doonaa moobilkii ugu horreeyay ee 5G oo leh Snapdragon 855
Shabakadda 5G waa mid ka mid ah teknolojiyadda isku xirnaanta ee teleefoonnada gacanta, tan iyo, sida aan ognahay, weli lagama taageerin meel kasta. taleefan kula dir Snapdragon 5.
OPPO F9: Isbeddelka ku imanaya qorraxda ayaa durbaba dhab ah
OPPO F9: Qadka dhexe ee cusub oo leh qaan gaar ah. Ka raadi wax badan oo ku saabsan moodeelkan cusub soo saaraha suuqa gali doona dhawaan.
Huawei Mate 20 Pro wuxuu lahaan doonaa dareeraha ultrasonic iyo 3D wejiga furan
Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahin cusub oo iftiimisay Huawei Mate 20 Pro cusub
Mar aan fogeyn OnePlus wuxuu ku dhawaaqay jadwalka cusbooneysiinta, kaas oo damaanad qaaday laba sano oo casriyeyn caadi ah ...
Xiaomi waxay durbaba ka shaqeyneysaa taleefankeeda casriga ah ee laab laaban. Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha sumcadda Shiinaha si ay u bilaabaan qaababkan isku laaban sanadka dambe.
Sony waxay ku dhowdahay inay ku soo bandhigto Xperia XZ3 IFA magaalada Berlin, Jarmalka, carwada caanka ku ah teknolojiyadda halkaas oo aaladaha casriga ah lagu soo bandhigo. Wax badan ka baro aaladan!
Samsung Galaxy A (2019) wuxuu lahaan lahaa kamarad saddex-laab ah
Samsung ayaa soo bandhigi doonta sedexda kamaradood ee dambe ee Galaxy A (2019). Ka ogow wax badan oo ku saabsan astaamaha ugu muhiimsan ee taleefannadan soo saaraha.
Oukitel WP2 waa jiilka labaad ee WP10000
Shirkadda Oukitel waxaa lagu gartaa inay soo saarto telefoonno kala duwan oo leh batteri awood weyn leh oo ay weheliso ...
Xiaomi Pocophone F1 wuxuu muujiyaa qeexitaannada qaarkood ka dib shahaadadiisa Bluetooth
Inbadan ayaa lagu xamanayay dhamaadka Xiaomi dhamaadka-sare. Qalabkan, Pocophone F1, ayaa booqasho ku tagay Bluetooth SIG, kaas oo Xiaomi Pocophone F1 uu ku dhex maro Bluetooth SIG uuna ku shahaado haysto. Baro wax badan oo ku saabsan qeexitaannada farsamo ee kan xiga dhammaadka sare leh Snapdragon 845.
Samsung waxay soo bandhigaysaa shaashad u gaar ah oo aan la jabin karin
Samsung waxay abuurtaa shaashad aan la jebin karin oo la tartanta Gorilla Glass. Ka ogow wax badan oo ku saabsan shaashadda aan la jebin karin ee sumadda Kuuriya ay abuurtay.
Saddexdaan ogeysiis ee qosolka leh, Samsung waxay ku dhaleeceyneysaa qaar ka mid ah howlaha iyo astaamaha iPhone-ka
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung, sida soo saarayaasha kale ee badan, badanaa waxay leeyihiin iphone-ka Apple-ka tixraac ahaan, si loo barbardhigo shirkadda The Korea ee Samsung ayaa daabacday saddex ogeysiis oo cusub halkaasoo ay ku muujineyso saddex astaamood oo ay boosteejooyinkoodu na siinayaan oo aynaan ka helin Iphone-ka
Iftiinka otomaatiga ah ee OnePlus 6 ayaa sababaya dhibaatooyin
Iftiinka otomaatigga ah wuxuu keenaa dhibaatooyin shaashadda OnePlus 6. Faahfaahin dheeraad ah ka hel dhibaatooyinka ay isticmaalayaashu qabaan.
Waxay xaday qiimaha Samsung Galaxy Note 9 oo ah 128 GB iyo 512 GB
Hadda waxaan ognahay qiimaha iyo midabada Galaxy Note 9 ee imaan doona Indonesia
Daabacaadda Gaarka ah ee 'Honor Play Edition' waxaa la sii deyn doonaa Ogosto 1. Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka daabacaddan gaarka ah ee taleefanka Sharafta leh suuqa.
Kirin 980 waxaa la soo bandhigi karaa 31-ka Ogosto
Kirin 980 waxaa la soo bandhigi doonaa 31-ka Ogosto ee IFA 2018. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida suurtagalka ah ee processor-ka sare ee Huawei.
Sharafta Xusuus-qor 10 ayaa hadda lagu sii hayn karaa Shiinaha
Faahfaahinta rasmiga ah ee Xusuusta Xusuusta 10 ayaa shaaca laga qaaday.
Inkasta oo dhaleeceyn la soo saaray sanadkii hore, Pixel 3 XL ayaa qaadan doonta darajada oo u eg sidan
Shirkadaha kiiska soo saara ayaa markasta ah kuwa ugu horeeya ee marin uhelaya boosteejooyinka cusub ee suuqa ku dhici doona, uguyaraan macluumaadka lagama maarmaanka ah.Sawirradii ugu horreeyay ee Google Pixel 3 iyo Pixel 3XL ayaa laga soo dhex helay kiis soo saaraha.
Xusuusin Xusuus-qorka 10 wuxuu yeelan doonaa batari 5.000 mAh
Xusuus-qoriga 'Honor Note 10' wuxuu soo bandhigi doonaa batari 5.000 mAh ah. Raadi wax badan oo ku saabsan batteriga uu taleefanka cusub ee soo saaraha Shiinaha yeelan doono.
Kuwani waa astaamaha Samsung Galaxy Tab A2 XL
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan tilmaamaha rasmiga ah ee kansarka xiga ee Samsung Galaxy Tab A2 XL
Fiidiyowyada xayeysiinta ee ugu horreeya ee Galaxy Note 9
Ogosto 9, shirkadda Kuuriya waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Galaxy Note 9, oo ah terminal aad u yar ...
OPPO Find X wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
OPPO Find X wuxuu ku dhacay imtixaanka adkeysiga JerryRigEverything. Wuxuu marayaa tijaabada caanka ah ee natiijooyinka liita ee taleefanka.
Dib u eegis YI casriga gimbal
Waxaan tijaabinay YI casriga gimbal, oo ah qalab lagu xasiliyo fiidiyowyadaada moobiilka xaalad kasta. Ma gaarsiisaa wixii ay ballan qaadayso?
TENAA waxay xaqiijineysaa in Meizu 16 uu la imaan doono dareeraha faraha ee lagu dhajiyay shaashadaha
Waxaan dhawaan arki doonnaa soo bandhigida Meizu 16, calamada soo socota ee shirkada Shiinaha ee imaan doonta bisha soo socota ee Agoosto si loo siiyo TENAA ayaa hada xaqiijisay jiritaanka akhristaha faraha ee shaashada ka hooseeya Meizu 16. Waan kuu balaarinay!
Huawei waxay isu taagtay inay tahay nooca ugu iibinta badan Shiinaha
Huawei waxay kordhisaa iibkeeda waxayna isku xoojineysaa inay tahay iibiyaha ugu fiican Shiinaha. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka sumadda ee waddankaaga.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition waxaa laga daawan doonaa Shiinaha 30
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ayaa laga bilaabi doonaa Shiinaha bisha July 30 si rasmi ah. Ka dib toddobaadyo qarsoodi ah, waxaan ognahay goorta ay suuqa soo galayso.
VLC ma taageerto Huawei !! Waxaan ku siineynaa xalka fiidiyowga waana sharxeynaa sababta
VLC hadda wixii ka dambeeya lama jaan qaadi karto shirkadda Huawei waana sababtaas sababta uu codsigu u joojiyay inuu ka soo muuqdo Dukaanka Play Store. Waxaan kuu sheegeynaa sababta keentay xaaladan iyo xalka.
In kasta oo ay ZTE isku dhacyadii dhowaa la gashay Mareykanka, haddana shirkadda Shiinaha ma joojiso howlaheeda dibedda, iyo xitaa in ka yar waddankii ay ka timid. In kastoo, aalad cusub oo ZTE ah ayaa laga diiwaangeliyey keydka xogta ee TENAA iyadoo la raacayo lambarka moodeelka A0722. Baro wax badan oo ku saabsan qeexitaankiisa farsamo.
ZTE waxaa lagu qasbi karaa inay bedesho magaceeda si ay ugu soo laabato howlgalka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan shuruudaha lagu soo rogay shirkadda Mareykanka.
Shirkadda Huawei ayaa hadda soo bandhigtay P Smart +, oo ah taleefan casri ah oo cusub oo loo sameeyay kuwa jecel sawirrada. Qalabkani wuxuu la socdaa astaamaha qaarkood Huawei wuxuu noo keenayaa P Smart +, nooca casriga ah ee casriga ah oo wata afar kamaradood iyo Qualcomm Snapdragon 710.
Sony Xperia XZ3 wuxuu la imaan karaa dareemayaal 48MP ah
Maalmo ka hor, Sony, shirkadda Japan, waxay soo bandhigtay aaladdeeda cusub ee 48 megapixel resolution sensor. Tan waxaa loo yaqaan Sony IMX586. Qalabka Sony ayaa hadda ka soo muuqday GFXBench. Tani waxay noqon kartaa Sony Xperia XZ3, oo ah shirkadda soo socota ee shirkadda.
HTC U12 Life: xogta muhiimka ah ee terminalka soo socda ee shirkadda waa la sifeeyaa
HTC waxay umuuqataa inay aasaasto waxbadan ama, kaliya, taxanaheeda U12 tan iyo, dhawaanahan, xogta muhiimka ah ee qalabkeeda soosocda waa lasoo daadiyay. , ayaa daadatay.
Sharafta Ciyaarta ayaa imaan doonta India iyada oo ah shirkad gaar u ah Amazon
Ciyaar sharafeedku wuxuu imaan doonaa Hindiya bisha soo socota, haddana waxaan ognahay inay si gaar ah u sameyn doonto Amazon.
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa inaysan jiri doonin Xiaomi Mi Max 3 Pro
Waa rasmi: Xiaomi Mi Max 3 Pro lama bilaabi doono. Maalmo yar ka dib warar xan ah oo badan, waxaan mar horeba ku helnay xaqiijin taleefanka ah.
Ulefone Armor 5, oo ah taleefan gacmeed xoog leh oo leh darajo, ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay
Ulefone ayaa hadda ku dhawaaqday Armor 5, oo ah taleefan adag oo la imaan doona sheeko cusub oo aan horay loogu arkin aaladaha iska caabinta sare ee taxanahan: a Ulefone Armor 5 ayaa hadda lagu dhawaaqay Agoosto 6, maalinta ay si rasmi ah u noqon doonto laga bilaabay suuqa Yurub.
Xiaomi Redmi Xusuusin 5: nooc cusub oo ah 6GB + 128GB ayaa yimid
Xiaomi, waa ku mahadsan tahay guusha ay Redmi Note 5 soo saartay waqti aan fogayn ay heshay, waxay noo keeneysaa nooc cusub oo leh 6GB RAM iyo 128GB oo ROM ah meel lagu kaydiyo
LG V20 wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysiinta Android Oreo
Labadii sano ee la soo dhaafay, iyo ka dib markii ay ku fashilantay taleefanka casriga ah ee shirkaddu soo saartay, waxay ku fashilantay xagga iibka maxaa yeelay fikradda ayaa ahayd mid aad u cusbooneysiin ah LG V20 ilaa Android Oreo ayaa ku dhow inay suuqa gasho, ka dib helitaankeedii ugu horreeyay Koonfurta Kuuriya.
Cusbooneysiinta ku saabsan Android Oreo ee Galaxy A, C iyo J ma imaaneyso illaa Diseembar
Maaha mid ka mid ah shirkadaha, nasiib darro, fiiro gaar ah u leh cusbooneysiinta qalabkeeda noocyada cusub ee Android. Samsung ayaa si rasmi ah u daabacday taariikhda qaar ka mid ah terminaalkeeda lagu cusbooneysiin doono Android Oreo, taariikhdaas oo noqon doonta ka dib markii la bilaabay Android P
LG waxay horey u diiwaan galisay magaca LG V90
LG wuxuu bilaabi doonaa ugu yaraan shan fac LG LG. Ogow wax badan oo ku saabsan diiwaangelinta LG V90 ee shirkadda Kuuriya
Isticmaalayaasha ayaa soo sheegaya dhibaatooyinka Google Pixel 2 bar raadinta
Waxaa lagu ogaaday dhibaato baarka raadinta Google Pixel. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cayayaankaan ku dhaca dadka isticmaala taleefanka Google
Samsung waxaa loo caleemo saaray inuu yahay kan ugu iibka badan India
Samsung waa sumcadda ugu iibinta badan Hindiya rubuca labaad. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka sumadda Kuuriya saddexdan bilood.
Sony Xperia XZ3 wuxuu lahaan karaa hal kamarad
Sony Xperia XZ3 waxay lahaan laheyd hal kamarad sida lagu arkay muuqalkeeda. Soo ogow naqshada taleefanka iyo joogitaanka hal kamarad.
Meizu 16 iyo 16 Plus waxay marayaan TENAA: astaamaha ugu waaweyn ayaa shaaca laga qaaday
Meizu 16 iyo 16 Plus, oo ah labada shirkadood ee soo socda ee shirkadda Shiinaha, ayaa dhawaan ka soo muuqday TENAA, cadeymaha Shiinaha, calanka Meizu ee soo socda, Meizu 16 iyo 16 Plus, ayaa hadda ka dusay TENAA oo ay weheliso astaamaha ugu waaweyn. Baro iyaga!
Haddii aad rabto nooca ugu jaban ee qoyska Mi A2, waxaad horey u haysatay Lite oo leh Android One iyo heerkaas oo ku fadhiya shaashadda moobiilka.
Xiaomi waxay u adeegsatay magaalada Madrid bandhigga caalamiga ee Xiaomi Mi A2 oo muddo dheer la sugayay, taleefan qiimo weyn lacag ku leh.
Sawir kale oo xayaysiis ah ayaa hadda la sifeeyey halka aan ku arki karno midabada cusub ee Galaxy Note 9 laga heli doono
Shaandheeyey qeexitaanka Pocophone F1
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Pocophone F1. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka nooca cusub ee Xiaomi oo aan hore u ogaanay wax yar.
Samsung waxay ku shaqeyn laheyd casriga casriga
Xanta: Samsung waxay soosaaraysaa taleefannadeeda casriga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan jiritaanka taleefankan shirkadda Kuuriya.
Qiimaha Galaxy Note 9 ayaa lagu muujiyay Yurub
Waxaan horeyba u haysannay qiimaha Galaxy Note 9 ee Yurub. Soo ogow qiimaha labada nooc ee Samsung-dhamaadka sare ay yeelan doonaan.
Websaydhka Samsung ayaa shaandheeya sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Galaxy Watch
Mid ka mid ah aaladaha aan inta badan ka hadalnay bilihii la soo dhaafay, ee aan ahayn taleefanka casriga ah, waa Galaxy Watch, oo ah shirkadda smartwatch ee shirkadda. gudaha Mareykanka.
Xiaomi Mi Max 3 Pro ayaa laga helay khadka tooska ah
Xiaomi Mi Max 3 Pro ayaa ka muuqda websaydhka Qualcomm. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka Xiaomi oo aan la ogeyn inuu jiro iyo in kale.
Xusuusta Sharafta 10 waxaa caddeeyay TENAA oo leh 512GB xusuusta gudaha ah
Maaddaama ay bilaabmayso taariikhda Honor Note 10, waxaan horeyba u ogaanay wax badan oo ku saabsan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee qoraalkan 'The Honor Note 10' wuxuu soo maray TENAA, shahaado-hayaha Shiinaha iyo jaangooyaha, oo leh qiyaastii 512GB xusuusta gudaha ah iyo 5.95-inji weyn Shaashadda AMOLED.
Samsung waxay soo bandhigi doontaa saldhig wadajir ah oo loogu talagalay Galaxy Note 9 iyo Galaxy Watch
9ka Agoosto, shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta Galaxy Note 9 cusub, oo ah taleefanka casriga ah ee ugu caansan ee loo yaqaan 'stylus' ee suuqa ku yaal.Laba saldhig oo lacag lagu shubo ayaa lagu darayaa tirada aaladaha iyo alaabooyinka arki doona iftiinka maalinta ee August 9. oo ay la socdaan Xusuusin 9
Kuwani waa qaar ka mid ah shaqooyinka S Pen ee Galaxy Note 9
Maalmo ka hor, waxaan ku celcelinnay qeexitaanka Galaxy Tab S4, iyada oo loo marayo qalabka qalabka, kuwaas oo kuwani ay yihiin qaar ka mid ah howlaha uu S Pen ee Galaxy Note 9 na siin doono, howlaha lagu sifeeyay Galaxy Tab S4 qalab adag
Sony IMX 586: Dareeraha cusub ee 48 MP Sony
Sony IMX 586: 48 MP Sony shidma kaamerada. Ka raadi wax badan oo ku saabsan dareemayaasha cusub nooca Japan ee imaan doona Sebtember.
Tilmaamaha cusub ee LG V40 ThinQ ayaa shaaca ka qaaday
LG V40 ThinQ: Qeexitaannada cusub ee la helay. Ka raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee shirkadda Kuuriya ee lagu dhawaaqi doono bisha Sebtember.
Nokia 5.1 Plus ayaa dhowaan ka bilaabmi doonta meel ka baxsan Shiinaha
Nokia 5.1 Plus ayaa dhawaan laga hirgalin doonaa suuqyo cusub. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista khadka dhexe ee ka baxsan Shiinaha oo dhowaan dhici doona.
Xusuusin Xusuus-qor 10 ayaa la soo bandhigi doonaa 31-ka Luulyo
Sharafta Sharafta 10 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 31-ka Luulyo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee calaamadda sumadda Shiinaha.
Iibinta Galaxy S9 waxay hoos u dhacday rubuca labaad ee sanadka
Iibinta Galaxy S9 ayaa hoos u dhacday rubuca labaad. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka liita ee shirkadda Kuuriya ee heerka sare.
Sony Xperia XZ2 Premium wuxuu imaan doonaa Yurub dhamaadka bisha Sebtember
Xperia XZ2 Premium wuxuu imaan doonaa Yurub dhamaadka bisha Sebtember. Raadi wax badan oo ku saabsan bilowga-dhamaadka sare ee Sony ee Yurub.
Nokia 5.1 Plus ayaa iibiya maalintiisa koowaad iibkeeda
Nokia 5.1 Plus ayaa 24 saacadood gudahood lagu iibiyaa Shiinaha. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka noocyada dhexdhexaadka ah ee Shiinaha.
Samsung's Android Go waxaa cadeeyay Bluetooth SIG
In badan ayaa lagu xamanayay Samsung oo ah kii ugu horreeyay ee Android Go, waana tan, ka dib markii dhowr taleefannada casriga ah ee nidaamkan lagu soo daray suuqa, imaatinka mobiilkii ugu horreeyay ee Samsung ee wata Android Go, oo ah nidaamka hawlgalka ee ku saleysan Android, ayaa sii kordhaya Oreo loogu talagalay mobilada dhamaadka-hoose.
Nokia 6.1 Plus ayaa xagaagan laga iibin doonaa dalal dhowr ah
Nokia 6.1 Plus ayaa imaan doona dalal cusub xagaagan. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabidda dhexdhexaadka Nokia ee suuqyada cusub.
Afhayeenka Samsung ee caqliga leh ee Bixby la soo bandhigi doono bisha Ogosto
Samsung waxay soo bandhigi doontaa afhayeenka caqliga badan ee Bixby bisha Ogosto 9. Wax badan ka ogow imaatinka sameecadda shirkadda ee suuqa.
Xusuusta Sharafta 10 waxaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2018
Xusuusta Sharafta 10 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 30 markay tahay IFA 2018. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan soo bandhigida Sharafta-dhamaadka-sare Ogosto.
Shirkadda Huawei waxay iibisay 100 milyan oo taleefanno ah illaa iyo hadda 2018
Huawei waxay gaadhay 100 milyan oo telefoon oo la iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka sumadda Shiinaha illaa iyo sanadkaan.
TalkBand B5, Huawei waa weara cusub oo ay ku xiran tahay shaashadda AMOLED
Mid ka mid ah soo saarayaasha mobilada ee ku hadhay suuqa la gashado ayaa ahaa shirkadda Shiinaha ee Huawei. In kasta oo ay run tahay in ay diiradda saareyso, inbadan oo ka mid ah shirkadda Huawei waxay noo keeneysaa beddelka TalkBand B3 Waxaan ka hadleynaa cusub ee TalkBand B5, wearable-ka la bilaabay dhowr saacadood ka hor. Baro taas!
Galaxy Watch ayaa la soo bandhigi doonaa iyada oo la raacayo Note 9 mana qaadan doono Wear OS
Samsung Galaxy Watch, haddii ugu dambeyn loogu yeero sidaas, waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 9-ka Ogosto oo ay ku qoran tahay Note 9, waxayna qaadi doontaa Tizen halkii Wear OS laga qaadi lahaa
Huawei Nova 3i waa la soo bandhigay. Baro wax walba oo ku saabsan moobaylka ugu horeeya ee leh Kirin 710!
Marka laga soo tago soo bandhigida Nova 3, shirkadda dhamaadka-sare ee cusub ee la socota Kirin 970 SoC, Huawei wuxuu ku dhawaaqay Nova 3i, oo ah meel dhexe oo leh The Huawei Nova 3i ayaa la soo saaray iyada oo ay la socdaan dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankeeda. farsamooyinka. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta ku saabsan qalabkan!
Dhamaan macluumaadka ku saabsan cusub ee Xiaomi Mi Max 3
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Xiaomi Mi Max 3, oo ah taleefan maanta ay soo bandhigtay shirkadda munaasabad rasmi ah
Sifeeyay qiimaha Xiaomi Mi A2
Sifeeyay qiimaha ugu dambeeya ee Xiaomi Mi A2 kahor soo bandhigidiisa. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha uu yeelan doono taleefanka Android One.
Kirin 710: processor-ka cusub ee shirkadda Huawei soo saartay
Kirin 710: Shirkadda processor-ka ee dhexdhexaadka ah ee Huawei waa la cusbooneysiiyay. Ka ogow wax badan oo ku saabsan processor-ka cusub ee dhexdhexaadka ah ee sumadda Shiinaha.
Sony Xperia XZ3 ayaa daadanaya kahor soo bandhigideeda
Ka dusiyey Sony Xperia XZ3 bil ka hor soo bandhigideeda. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Jabbaan ee imaan doonta IFA 2018.
Huawei Nova 3: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca Shiinaha, oo ah meel-dhexaad ah
Laba mobiil oo cusub oo Vivo ah ayaa hadda ka dusay TENAA
Vivo waxay umuuqataa inay heysato laba terminal oo cusub oo dhexda dhexe ah. Kuwani waa Vivo V1732BA iyo V1732BT, taleefannada cusub ee shirkadda ee leh laba aaladood oo Vivo ah ayaa hadda lagu sifeeyey websaydhka TENAA, oo ah shahaadada Shiinaha ee ay marto taleefannada lagu iibin doono Shiinaha.
Sony waxay xaqiijineysaa inay ku soo bandhigi doonaan taleefan cusub IFA 2018
Sony waxay ku soo bandhigi doontaa taleefan cusub IFA 2018. Wax badan ka ogow xaqiijinta shirkadda iyo taleefannada ay soo bandhigi karaan.
Xiaomi Mi Max 3 qeexitaannada ayaa la muujiyay
Shaaciyey qeexitaanka rasmiga ah ee Xiaomi Mi Max 3. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa aan ka filan karno taleefanka nooca Shiinaha.
Armani wuxuu ku dhawaaqayaa smartwatts-keeda cusub iyadoo Google Assistant lagu daray
Waxaad horeyba u ogaankartaa saacadaha cusub ee casriga ah ee Armani kuwaas oo lagu garto inuu leeyahay Kaaliyaha Google ee kuxiran Wear OS.
Spotify Lite hadda si rasmi ah looma heli karo Wear OS
Isticmaalaha 'XDA Developers' ayaa sii daayay nooc aan rasmi ahayn oo ah 'Spotify Lite for Wear OS' kaas oo noo oggolaanaya inaan maamulno kontoroolka koontadayada.
Vivo Nex S kaamirada laga noqon karo waxay dhaaftaa JerryRigEverything's tijaabooyinka ugu adag
Kaamirada lagalaaban karo Vivo Nex S waxay cadeysay inay ka adagtahay khabiiro badan oo markii hore sheeganayay.